Wafdi ka socda Dowladda Federaalka oo Shir uga qeyb-galaya Garoowe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee XFS Eng. Cabdullaahi Cali Xassan ayaa maanta safar shaqo ugu ambo baxey Caasimadda Maamul Goboleedka Puntland ee Magaalada Garoowe.
Wasiirka ayaa waxaa halkaasi uu ka furi doonaa Kulanka wada-tashiga Hindise Sharciyeedka Shirkadaha oo socon doona muddo laba cisho ah.
Kulankan Wada-tashiga ah ayaa waxa ka qeyb qaadanaya Guddiga Aqalka Sare u qaabilsan Maaliyadda, Dhaqaalaha, Ganacsiga iyo Warshadaha, Wasiirrada Dawladaha Xubnaha ka ah Dawladda Federaalka, Guddiyada Ganacsiga iyo Warshadaha ee Baarlamaanka Dawladaha Xubnaha ka ah Dawladda Federaalka.
Maalinta berito oo Isniin ah ayaa la filayaa in uu Shirkaasi ka furmo Garoowe,waxaana Wasiirka Ganacsiga ee Xukuumadda Soomaaliya uu sidoo kale uu la kulmi doonaan Madax katirsan Puntland.